Archipelago 300 amamitha ukusuka olwandle
Le yindlu ebukekayo etholakala esiqhingini esidumile saseBlidö. Ukusuka eStockholm ungahamba ngesikebhe, ibhasi noma imoto. Kukhona ifriji, i-micro wave owen, iketela nama-hotplates ane-owen endlini. Ibhavu nethoyilethi elomile kusendlini ehlukene.
Indlu iyathandeka futhi ithokomele futhi ama-sourrandings mahle kakhulu. Indawo eningi yokudlala izingane kanye namamitha angu-300 kuphela ukuya olwandle. Indlu yangasese eyomile kanye neshawa kutholakala ezakhiweni ezihlukene. Endlini kunefriji, ama-hotplates ane-owen neketela. I-microwave ond nayo iyatholakala. Wenza isitsha bese ukha amanzi esakhiweni esifanayo lapho kukhona ishawa, umshini wokuwasha kanye nesauna.
I-landscape inhle kakhulu. Ngesikhathi esifanayo njengoba uzwa indawo yokulima kusukela esikhathini esedlule uzozibonela ubuhle beqoqo leziqhingi elikhulu laseSweden. Lena indawo yokuthanda!
Akukho okufanele sikhathazeke ngakho.